> Resource > Ladnaansho > Recovery TIFF: Sidee inuu ka soo kabsado TIFF Files
Waxaan soo kabsado tirtiri karaa TIFF File?
Waxaan si qalad ah la tirtiro photos TIFF qaar ka computer iyo ma ahan in aan gurmad kasta oo iyaga ka mid ah. Hadda waxaan u leeyihiin in ay u isticmaalaan, laakiin adag tahay in aan ka heli kartaa meel kasta. Ma jirtaa xal kasta oo igu aan dib ugu heli files TIFF aan la tirtiro? Waan kuugu mahad naqayaa doonaa mid aad u badan haddii Ma i caawin kartaa. Best xiriira.
File TIFF waa nooc sawir la size file waaweyn iyo tayada sawirka sare ah. Waxaa si weyn loo isticmaalaa labada computer Windows iyo Mac. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli lagu lumin karaa sababtoo ah ula kac ah ama shil tirtirka, formatting, musuq-maasuq, nidaamka ama qalad xitaa jeermiska fayraska. Marka soo food saartay arrimaha khasaaro file TIFF, xalka ugu wanaagsan waa in aad fiiriso barnaamij soo kabashada TIFF sawir caawimaad. Maxaa yeelay, ilaa iyo inta files TIFF aan la overwritten, aad suurto gal dib u heli kartaa.
Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa mid ka mid ah xalka kabashada TIFF adiga kuu wanaagsan. Waxay awood u in aad ka bogsato lumay, tirtiray, formatted ama xitaa ku kharribeen files TIFF ka adag drive your computer ee, drive dibadda adag, kaadhka xusuusta, USB flash drive iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Marka laga reebo ka soo kabashada sawir TIFF, barnaamijkan waa awoodaa inuu ka soo kabsado dhammaan noocyada sawir, oo ay ku jiraan jpeg, PNG, GIF, BMP, PSD, iwm
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Photo Recovery inuu ka soo kabsado files TIFF. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad iskaan qalab aad iyo Falanqeynta helay files TIFF si aad eegi kartaa inta aad files TIFF badiyay lagu soo kabsaday karo.
Qabtaan TIFF Recovery in 3 Talaabooyinka
Sidee inuu ka soo kabsado files TIFF? Waxa kaliya ee aad u baahan tahay 3 tallaabo barnaamijka Wondershare Photo Recovery. Haddaba fuliyaan kabashada sawir TIFF la Windows version of Wondershare Photo Recovery. Users Mac raaci karaan talaabooyin la mid ah in ay aad u soo ceshano aad files TIFF lumiyay version Mac.
Tallaabada 1 ka dib rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Photo Recovery on your computer, waxaad heli doontaa interface ah sidan. Fadlan guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan soo kabashada TIFF.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado files TIFF ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubi in uu in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 2 In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan drive in aad doonaysid in aad ka soo kabsado files TIFF ka oo guji "Scan" si aynu barnaamijka baarista drive.
Si aad u soo kabsado files TIFF tirtiray, waxaad riixi kartaa "Xulashada Filter" furmo in ay doortaan "/ TIFF TIF" nooca file in astaysto iskaanka ah.
Tallaabada 3 Hadda dhammaan faylasha TIFF helay on your drive la soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Oo waxaad iyaga ku eegaan karo mid mid.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan TIFF faylasha aad rabto in ay dib u hanato oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ku hayn faylka TIFF soo kabsaday dib meesha uu asal ah.
Recuva u Mac OS X El Capitan